Baasaboorka Mareykanka miyaa Farmaajo ka hor istaagay inuu ka qeyb galo shirka UN-ka?
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa hooraantii bishii Maarso ee sanandkan soo saartay amar ku aadan muwaaddiniinta Mareykanka ee xilalka saameynta siyaasadeed leh ka haya dalal kale.
Madaxweyne Farmaajo ayaa markii labaad ka baaqday shir weynaha guud ee Qaramada Midoobay ee magaalada New York ka dhacay sannadkii lasoo dhaafay ee 2018-ka.
Baraha bulshada ayaa la isku weydiinayaa sababta uu madaxweynaha markii labaad uga baaqanaayo shirka, iyadoo dadka qaar ay sheegayaan in madaxweynuhu uu haysto baasaboor Mareykan ah, sidaasi darteedna uu u baaqday.
Sharciga dalka Mareykanka ma oggola in qof haysta baasaboorkooda uu dalkaasi tego isagoo adeegsanayo baasaboor dal kale.
Balse wasiirka arrimaha dibada ee Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad, oo shirkaasi ku matalaya dowladdiisa ayaa BBC u sheegay in madaxweynaha uu u kala hormariyo howlaha u yaalla sida ay u kala muhiimsan yihiin.
''In madaxweynaha uu shirka ka baaqdo qasab ma ahan inay sabab yeelato, laakin waxay noqon kartaa inuu arrimo ka muhiimsan tagitaankiisa New York waqtigan la joogo ay jiraan, marka in la'is weydiiyo oo lala yaabo ma'aha. Madaxweynaha ayaa qiimeeya sida ay u kala horreeyaan, una kala muhiimsan yihiin howlaha uu qabanaayo, waana dhaqan adduunka ka jira, wax Soomaaliya kaliya u gaar ah ma aha'' ayuu yiri wasiirka arimaha dibada ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad.
Dr Ibrahim Bursalid oo ka faalooda arrimaha caalamka, oo BBC la hadlay ayaa sheegay in ay jiraan waxyaabo badan oo loo sababayn karo arrintan.
''Walow aanan la ogeyn sababta dhabta ah ee ka dambeysa in madaxweynaha uusan aadin shirkaasi muhiimka ah marki labaad, waxaan garaneynin in madaxweynahu ay ka tahay biseyl odaynimo iyo in ay ka tahay quud-darreyn uu quud-darreynaayo dhalashadiisa mareykanka.''
Dad badan oo falanqeeya arrimahan ayaa sheegaya in madaxweynuhu uusan rabin inuu wareejiyo basaboorkiisa Mareykanka, uuna masaalixda Soomaalida ka ka doorbidaayo baasaboorka.
Dr Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo isna ka faalooda arrimaha caalamka ayaa dhankiisa qaba in labo mid uun ay tahay.
''In madaxweynaha uu waayay wax uu la hor tago shirka, maadaama amniga dalka aan horumar laga samaynin, dowlad goboleedyadana ay is khilaafsan yihiin. Waxaa laga yabaa in uu is leeyahay tan xalli, ka dibna shirarka xiga ee Qaramada Midoobay ka qeyb qaado, adigoo haysta wax cad oo muuqda. Waxaa kale oo suurta gal in uusan dooneynin inuu wareejiyo baasaboorkiisa Mareykanka madaama waqti yar ay u hartay uusanna hubin in uu mar labaad soo laaban doono iyo in kale.'' ayuu yiri Dr Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad.
Balse Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay inaysan jirin wararkaasi oo dhan, falanqeeyayaashuna ay fiicnaan lahayd shaqo kale inay ku mashquulaan.
''Farmaajo madaxweyne Mareykan ma aha, waa madaxweynaha Soomaaliyeed. Xeel dheerayaasha sheegaaya in labo madaxweyne oo Mareykan aysan hal mar wada joogi karin Mareykanka waa kuwa aan aad u xeeldheereyn, madaxweynuhu waa uu imaan karaa Mareykanka laakiin go'aanka isaga ayaa iska leh, mana haboonna in la yiraahdo maxaad u tagi waysay.''
Madaxweyne Farmaajo ayaa dhawaan sheegay in sababta uu shirka Qaramada Midoobay uga qeyb gali waayay ay tahay maadaama uu ku mashquulsan yahay xallinta khilaafka maamul goboleedka Galmudug, balse masaalix badan oo hadii madaxweynaha uu tago shirkaasi u hirgali lahaa Soomaaliya ayaa u muuqda hadda in ay meesha ka bexeen.
"Farmaajo masoo laabanayo, ha joojiyo haraanti danbeedka"
Soomaliya 01.02.2020. 17:20